N'ogbe Banyere Anyị - Hangzhou HEO Supplier & Manufacturer
Ekwentị / Whatsapp / WeChat: 008618157136026 Tel: +86 57186162857
COVID-19 Cassettes Nnwale Ọsọ
Ọrịa Cassettes Na-efe Ọrịa Na-efe Ọrịa
Hangzhou HEO Technology Co., LTD bụ onye nrụpụta nwere ahụmahụ nke etinyegoro aka na Nchọpụta, ingzụlite na ducingmepụta In-Vitro Diagnostic (IVD) Cassettes Test Rapid (Kit) na Ngwá Ọrụ Ọgwụ Ndị Ọzọ na 10 gara aga. Anyị meriri ezigbo mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na mba 60 karịa mba ụwa niile, dịka mba Europe, UK, North America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Latin America, South America, mba Africa wdg HEO Technology na emi odude ke kasị mma obodo- Hangzhou, China, nke ama ama maka West Lake.
HEO Technology na-ekpuchi ebe karịrị 5000 square mita omumuihe. Anyị nwere ibuo osisi gbaara site CHINA National Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa na a 1100 square mita C-ọkwa ọcha omumuihe. Anyị nwere ọkachamara laabu R & D otu na 10 ọzọ ọhụrụ ngwaahịa na-eme nnyocha na mmepe.
Ebe ọ bụ na ya oruru na 2011, anyị malitere ilekwasị anya nri nchekwa na In-Vitro Diagnostic Reagents 'nnyocha, mmepe, na anyị na-nditịm na-eso ISO13485 na ISO9001 na àgwà management usoro na niile mmepụta usoro.
Anyị isi ngwaahịa akara
Ọrịa Na-efe Ọrịa
Dịghịzi nchoputa (Colloidal gold immunoassay)
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette （Colloidal Gold）
Ngwa ngwa, naanị nkeji 15 iji mata nsonaazụ ya
COVID-19 IgG / IgM Otutu Ule Cassette (Colloidal gold)
Ezigbo, dị irè, nke a na-ejikarị
Influenza A + B idgba ule ọsọ ọsọ
Nchọpụta ngwa ngwa nke nje influenza
COVID-19 / Influenza A + B Antigen Combo Rapid Test Cassette
Nchọpụta ọsọ ọsọ nke nje corona ọhụrụ na influenza
Ọgwụ nke Mmegbu / Toxicology
Anyị bụ ndị na-eduga emeputa na nkà na ụzụ na in vitro diagnostic ngwaahịa, na a siri ike aha na iche iche ọrụ na elu mgbanwe ka ọkachamara ndị nkesa na partnering mmekọ na ahịa ụwa.
Na slogan ”Ọkachamara Ndị Ọrụ & Ọrụ Na-achịkwa Ọdịnihu! ”， HEO mgbe niile na-achụ kacha mma mma kwụsie ike na ofụri azụmahịa ọrụ. Anyị na-elekwasị anya na usoro njikwa njikwa ọ bụla na nkọwa.
Anyị ji obi anyị niile na-anabata ndị enyi n'ụwa nile na-abịa ileta anyị factory nke dị site mara mma West Lake na Hangzhou.
Ihe ngosi anyị
201lọ 201, Buildinglọ 3, Mba 2073 Jinchang Road, Yuhang District, Hangzhou, China